भाइरल झाँक्री छुटेपछि गुरु बनझाँक्रीले गरे अचम्मको मुन्धुमले स्वागत, थानमै देखाए चमत्कार ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
March 5, 2021 AdminLeaveaComment on भाइरल झाँक्री छुटेपछि गुरु बनझाँक्रीले गरे अचम्मको मुन्धुमले स्वागत, थानमै देखाए चमत्कार ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
झाक्री १४ दिनपछि छुटेका छन । केही समय अघिदेखि मोरङमा धेरै युवतीहरु बिरामी पर्दै मुर्छा पर्न थालेपछी धेरै झाक्रीले चिन्ता बसे तर कसैले पत्ता लगाउनै सकेनन । उल्टै झाक्री नै ढलेपछी झनै गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको र अन्त्यमा ताप्लेजुङका झाक्री कृष्ण बिकलाई बोलाएर चिन्ता बस्न सुरु गरेर चार दिन चार रात नसुती धामी बसेर ढ्याङ्रो बजाएपछी अन्त्यमा छ बर्ष पहिले मोटरसाइकल दुर्घटनामा निधन भएका जीवन राईको चिहान खनेर हेर्नुपर्ने भनेर झाक्रीले भनेपछी सुरक्षाकर्मी र गाउले बुद्धिजिबि सहित करिब दुई सय मानिसहरुले रातको १२ बजे चिहान खने । सुरुमा छिटो पत्ता लगाउनुपर्छ भन्दै झाक्रीलाई नै हा.तपा.त गरेको समाजले चिहानमा हेर्दा कसैले नसोचेको दृश्य देखिएपछी धामीलाई नै माफी मागेर सम्मान समेत गरेका थिए ।
आमाबुबाले रुदै यस्तोसम्म सुनाए कि सबै भावुक बने। झाक्री पनि भावुक बन्दा डि.बि लिम्बू समेतले आँसु थाम्न सकेनन । झाक्रीलाई उनका गुरु बनझाक्रीले झाक्री मुन्धुमले स्वागत गर्दा सबै चकित बने । यसरी फर्किए झाक्री आफ्नो थानमा तलको भिडियोमा हेर्नुहोला छक्क पर्नुहुनेछ । भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोसः